NISA oo shaacisay in ay qabatay Xubin ka tirsan Al-shabaab – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA NISA oo shaacisay in ay qabatay Xubin ka tirsan Al-shabaab
War qoraal ah oo ka soo baxay Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA, ayaa lagu sheegay in Howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen Degmada Shibis, iney gacanta ku dhigeen Xubin ka tirsan Ururka Al-shabaab oo dilal qorsheysan ka geysan jiray Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA, mashaacin magaca shaqsiga ay gacanta ku soo dhigeen ama Sawirkiisa,balse waxa ay shegeen in howlgal qorsheysan oo ay ka sameyeen Xaafad ka tirsan Degmada Shibis iney ku soo qabteen.
Ciidamada Amniga ayaa gacanta ku soo dhigay Xubin Amniyaat Al-shabaab oo ku sugnaa Degmada Shibis. Eedeysanaha oo ka howlgali jiray Degmooyinka Shibis & Heliwaa ayaa lagu tuhmayaa inuu ka dambeeyay dilal qorsheysan oo dad shacab ah loo geystay, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxaya NISA.
Sikastaba ha ahaate Hay’adda Nabad sugida iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, ayaa inta badan sheegta iney soo qabtaan Xubno ka tirsan Al-shabaab ama la xiriirnayo,iyadoona bilihii ugu dambeeyay xoojiyay howlgallada ay ku baadi gobeyso Xubnaha ka tirsan Al-shabaab.
Previous articleFaah Faahin:-Qarax ka dhacay Boosaaso
Next articleAskari wiil BAJAAJLE ahaa ku dhaawacay Muqdisho oo xabsiga lagala baxay
Gaadiid hub siday oo la qabtay
Dacwad dil ah oo loo heysto Maxamed Nuur, oo ka mid...